I-Hydraulic Bottle jack jack - EPONT
I-Hydraulic Bottle jack jack
Ukho kwindawo efanelekileyo I-Hydraulic Bottle jack jack.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana EPONT.siqinisekisa ukuba ilapha EPONT.
yeyona mveliso yokugqibela ebaleni..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu I-Hydraulic Bottle jack jack.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-New Boir Bottle jack
I-Air Boytle jack yebhotile, iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono